Jwxo-shiil oo Eritrea si Deg Deg ah Looga Yeedhay – Rasaasa News
Nov 16, 2009 dambiile, Eritrea, Jwxo-shiil, Puntland
Warar xog ogaal ah oo naga soo gaadhaya dalka Eritrea ayaa waxay sheegayaan in dambiile Jwxo-shiil, si deg deg ah loogaga yeedhay dalka Eritrea uuna ku laabtay. Waxaa uu dalka Ingriiska u tagay arimo caafimaad iyo arimo kale oo uu ku guul daraystay oo ahaa in uu ka qaato wixii qaaraan ay xigtadiisu ka u uruuriyeen dadka u afduuban. Waxaa kale oo soo food saaray arimo uusan filayn oo kaga yimid ciidanka Booliska ee dalka Ingriiska oo inta la ogg yahay muddo labo goor ah su,aalo la xidhiidh dhinaca argagixisonimada waydiiyey iyo waxa uu ka Og yahay dilkii Dr. Dolal.
Jwxo-shiil, waxaa labo bilood iyo badh ka hor lagu daweeyey Isbitaal ku yaal dalka Ingriiska, halkaas oo uu ku jiray mudo bil iyo badh ah. Jwxo-shiil, oo qoran hawlgab penssioner], ayaa waxay dawlada Ingriisku ku bixisaa sanadkiiba £17,420, lacagtan oo isugu jirta lacagta hawlgabka ee uu ku nool yahay iyo kirada guriga loogu talo galay in deganaado, ayaa waxay ka timaada canshuurta laga qaado dadka british-ka ah. Jwxo-shiil, hadii ay ogaan lahayd waxaada shaqada iyo hawlgabka [Department of Work and Pension (DWP)] way xidhi lahayd.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu ku haystaa magaalada Casab ee dalka Eritrea, guri iyo 2 gaadhi oo Landcruiser oo uu ka iibsaday qaaraanakii laga qaaday qurbo joogta ee loogu talo galay in lagu kaalmeeyo ciidanka Jabhada.
Jwxo-shiil, oo hal sano kor ku guursaday gabadho la eg ilmaha uu awowga u yahay, ayaa hoygiisa ugu muhiimsan wuxuu ku yaal magaalada Casab, dalkan Ingriiskana u yimaada oo kaliya in lagu daaweeyo, arimaha lacagaha ka soo gala hawlgabkan u dhaafay afadiisa weyn.
Jwxo-shiil, oo ay ummada Somalida Ogadeeniya wada ogg tahay, hawlaha uu haatan ku jiro in ayna ahayn kuwo dan u ah galgan Jabhadeed balse lid ku ah Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] oo iyadu waday muddo halgan xaq ah.
Jwxo-shiil, waxaa uu shaqaale u yahay dalka Eritrea, waxaana uu qaataa mushaar u dhigma mushaarada ay qaataan wasiirada Eritrea, hawsha ugu muhiimsan ee uu u qabto Jwxo-shiil dalka Eritrea, ayaa ah in lagu cadaadiyo kaliya xukuumada Itobiya. Xukuumada Eritrea, waxaa dhulka Somalida Ogadeeniya ka jooga saraakiil la taliyeyaal ah oo amarka siiya ciidanka cadaadiska ee ummada Ogadeeniya.
Dagaalka la sheegay in uu ka dhacay dhawr meelood oo dhulka Somalida Ogadeeniya ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan ka tirsan ciidanka wata magaca ururka ONLF. Waa caadadiis in Jwxo-shiil marka uu wax doonayo uu sameeyo arimo uu ku haligo wiilasha reer miyaga ah ee u af duuban, laba arimood ayaana keenay xiligan uu sameeyo haligid; isaga oo ay luntay sumcadii uu bulshada ku dhex lahaa oo aan soo celin karin iyo isaga oo looga yeedhay Caasmara, dalka Eritrea.
Arimaha ugu muhiimsan ee xiligan Jwxo-shiil loogu yeedhay in uu Caasmara yimaado ayaa waxaa kow ka ah, talaabooyinka ay qaaday maamul gabaleedka Puntland ee ah in haatan wixii ka dambeeya ayna xukuumada Eritrea ka kaluumaysan karin xeebaha Puntland oo ay awal hore waxa ay doonto ka soo dajin jirtay, kaalmo hub iyo rasaasna ku siin jirtay budh cad badeeda Somaliyeed iyo Jwxo-shiil.
Lama Oga meesha kale ee ay xukuumada Eritrea ka hawl galindoonto budhcad badeeda Somaliyeed iyo Jwxo-shiil, waxaase suurto gal ah in ay mar labaad hawlo ka bilaabaan xeebaha ku yaal badhtamaha dalka Somaliya.